Fanadinana bakalorea: 184.863 ireo mpiadina manerana ny Nosy - ewa.mg
News - Fanadinana bakalorea: 184.863 ireo mpiadina manerana ny Nosy
Nanao tatitra mikasika ny
antontanisan’ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana bakalorea ny
talen’ny fampianarana ambony Raharimalala Laurence, ao
amin’ny minisitera, omaly.
Fantatra tamin’ny fanazavana
nentin’ny tomponandraikitra fa miisa 184 863 ireo mpiadina
fanadinana bakalorea manerana ny Nosy amin’ity taona ity.
Nitombo 12,45% izany raha oharina
ny tamin’ny taon-dasa 164.396. Mbola miandry ny
fahatongavan’ny tatitra mirakitra ny taratasy fisoratana anarana
avy any amin’ny ofisin’ny bakalorea isam-paritra kosa mikasika ny
fitsinjarana isaky ny sokajy avy.
Misokajy telo lehibe ny safidin’ny
mpiadina . Ao ny sokajy literera, sokajy siantifika ary ny sokajy
OSE (oranganisation société et economique)
Ho an’ny literera indray dia
ahitana ny zana-tsokajy A1,A2 ary L. Ny siantifika, misy
zana-tsokajy C,D ary ny S. Anisan’ny sokajy vaovao ny OSE. Tanjona
ny hanampiana ny ankizy hiatrika ny fianarana raha te hanohy eny
amin’ny lalam-piofanana toekarena na sosiolojia na fitantanana, na
lalàna rehefa mianatra eny amin’ny oniversite.
Hahafahan’ireo ankizy mamaritra ny
hoaviny tsy hitsapatsapany intsony rehefa eny amin’ny oniversite
izy ireo, hoy ny fanazavan’ny talen’ny fampianarana ambaratonga
faharoa ao amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Hananany
angona ara-pahalalana hahafahany miatrika ny anjerimanontolo io
sokajy OSE io.
Ny option L sy S dia efa tena
nampanarahana izay maha literera na siantifika azy izay mihitsy.
Miakatra coefficient 5 na 6 ny taranja fototra ao aminy.
Mikasika ny adina
ara-panatanjahantena, sady misy ny fampiasam-batana no misy ny
adina am-bava, araka ny safidin’ny mpiadina sy ny fahazoan-dalana
Samy manana ny fandaminana
amin’izany ny isaky ny faritany, izay efa samy manana
L’article Fanadinana bakalorea: 184.863 ireo mpiadina manerana ny Nosy a été récupéré chez Newsmada.
Voatondro ho namaky trano tany Amboasary Atsimo ny lehilahy roa tamin’ny dimy lahy noka­rohina izay voasambotry ny polisy tany an-toerana, tamin’ny herinandro lasa teo. Tratra niaraka tamin’ ny karazana fanalahidy maromaro sy fanafody gasy izy ireo. L’article Mpamaky trano est apparu en premier sur AoRaha.
Vakinankaratra: anarana sisa ny hoe ombivavy beronono
Any amin’ny faritra Vakinankaratra ny tena mitrandraka fiompiana ombivavy beronono eto Madagasikara. Karazany maro ny fomba famatsiana ireo ombivavy ireo, efa nanaovana fanadihadiana tany Betafo, tany Antsampanimahazo, tany Faratsiho, sy tany Vinaninkarena. Nojerena ny karazana fomba fiompiana, fantarina amin’izany, manana velarana firy ny omby iray, ny volan’ny mpiompy.Ampolony maro ireo tany Vinaninkarena sy tany Antsampanimahazo, fantatra fa misedra olana maro ireo mpiompy nanaovana fanadihadiana. Anarana sisa ny maha ombivavy beronono. Tena olana ny masonkarena. Nisondrotra avokoa ny vidin’ny provandy sy izay ilaina amin’ny fambolena vilona. Betsaka ny filàna amin’ny famokarana nefa ny vidin’ny ronono, tsy mahafa-po azy ireo.Niakatra ny vidin’ny masomboly hafarana avy any ivelany. Angatahina tosika amin’ny fiaraha-miasa amin’ny FDA* momba ny sakafo, ny fahasalamana, ny teknika fa tsy fiofanana intsony no ilain’izy ireo. Efa betsaka ny fiofanana azo fa fanampiana fampanarahana tosika ny tadiavin’ireo mpiompy. “Tsy mahafeno ny fepetra takina intsony ny vokatra sy ny kalitao”, hoy ny mpikambana amin’ny kaoperativa mpiompy. Tsy manome ronono 20 litatra isan’andro intsony ny ombivavy iray. Mitotongana ity fihariana ity any Vakinankaratra. Misy ny lalam-barotra, saingy mifanaraka ny mpividy ka tsy mampiova ny vidim-bokatra, ny mpanao fromazy ihany no sahy mividy lafo. R.MathieuFDA* : Fonds de développement agricoleL’article Vakinankaratra: anarana sisa ny hoe ombivavy beronono a été récupéré chez Newsmada.
Fahafatesana mampiahiahy :: Vehivavy hita faty nihantona tao an-tranony
Tsy nisy aina intsony ny vehivavy iray, manodidina ny telopolo taona, hita faty nihantona tamin’ny tady tao an-tranony, tany Ambolomadinika Sambava, afak’omaly hariva. Antony roa no tombanana ho nitarika ny fahafatesany: na nananton-tena noho ny famonoan-tena, na nisy namono. Nosamborina sy fotorana any amin’ny Borigadin’ny zandarimaria any an-toerana ny vadiny. Ny fianakaviana teo amin’ ny manodidina no nahita voalohany an’ilay vehivavy maty tao an-tranony. Nifatotra tady ny tendany. Tsy hita teo an-tanàna anefa ny vadin’ity namoy ny ainy. Notadiavina izy sady nantsoina haingana ny mpitandro filaminana. Hitan’ny zandary ihany izy avy eo. “Mampiahiahy tanteraka ny fahafatesan’ilay vehivavy. Nisy mangana ny tongony sy ny tanany ary ny tendany. Tahaka ny tsy mitombina ny hoe nananton-tena izy satria tsy nahitana zavatra hafa, toy ny seza nahafahana nanaporofo an’izany teo akaikin’ny razana. Nitehina tamin’ny tany ihany koa ny tongony ka ny tady nifatotra teo amin’ ny tendany no mitazona azy. Mety ho nokendaina vao nahantona teo io vehivavy io”, araka ny vinavinan’ny zandary nanao ny fizahana. Ankoatra ireo, voalaza fa nahitana rongony tany amin’ ilay lehilahy voasambotra. Izy no noahiahiana voalohany noho ny fitsoahany tamin’ny voina nahazo ny vadiny. Andrasana ny valin’ny fizahana ny razana nataon’ny mpitsabo mba hamaritana mazava ny antony nahafaty an’ity vehivavy ity. L’article Fahafatesana mampiahiahy :: Vehivavy hita faty nihantona tao an-tranony est apparu en premier sur AoRaha.
Voina tao an-trano fandriam-bahiny :: Lehilahy aôstraliana iray hita faty tany Antsalova
Fijanonan’ny fo tampoka. Hita faty tao amin’ny trano fandriam-bahiny iray, tany Beampinga-Bekopaka, any Antsalova ny vatana mangatsikan’i Certer Donald, teratany aôstra liana, manodidina ny 70 taona, tamin’ny 24 jolay lasa teo. Ny mpitantana io trano fandriam-bahiny io no nampilaza ny mpitandro filaminana mikasika ny voina. Nambaran’ny mpitsabo nijery ny razana fa vokatry ny fijanonan’ny fo tampoka noho ny fisentosentoana mafy nisesisesy no nahafaty an’ity teratany vahiny. Nisy tamin’ireo olona niaraka taminy nanatontosa ny fandehanana nitety ny Tsingy no nilaza fa efa nitaraina ho reraka mafy izy nandritra io fotoana io, ka nody haingana. Ahiana ho vokatr’izany dia lavareny tao amin’ny Tsingy izany no nitarika tamin’ny fahafatesany. Miandry ny fianakaviany na izay olona handevina azy na hitondra ny razana any ivelany ao amin’ny tranom-patin’ny hopitaly ao Morandava ny vatana mangatsiakan’io mpizaha tany aôstraliana io, nanomboka omaly. L’article Voina tao an-trano fandriam-bahiny :: Lehilahy aôstraliana iray hita faty tany Antsalova est apparu en premier sur AoRaha.